အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ ကိုကို မမ များသာ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်ပါနော် ...! - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ ကိုကို မမ များသာ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်ပါနော် ...!
အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ ကိုကို မမ များသာ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်ပါနော် ...!
Apann Pyay 1:20 AM ဗဟုသုတအစုံ , ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ Edit
တစ်ခါတုန်းက ခဏခဏစကားများတတ်ကြတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်စကားများတဲ့အခေါက်တိုင်း ယောက်ျားဖြစ်သူက အလျှော့ပေးတတ် တယ်။ . တစ်ခါမှာတာ့ အမျိုးသမီးက သူ့ယောက်ျားကို ထူးဆန်းလို့မေးလာမိတယ်။ . "ယောင်္ကျားရေ.. ရန်ဖြစ်တိုင်း ရှင်ဘာလို့ ကျွန်မကို အလျှော့ပေးတာလဲ။ တစ်ခါတစ်လေကျ ကျွန်မဘက်က မှားတာလည်းရှိတယ်လေ" . သူ့ယောင်္ကျားဒီလို ပြန်ဖြေတယ်။
"မင်းက ကိုယ့်မိန်းမ လေကွ။ဘာပဲပြောပြော ရှေ့ ဘဝက ရေစက်ကြုံလို့ ဒီဘ၀မှာ လင်မယားလာဖြစ်ကြတာ။ ကိုယ်ပြောတာ နိုင်သွားတော့ရော ဘာထူးမှာလဲ။ စကားနိုင်ပေမယ့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှုံးသွားမှာလေ။ ဒီဟာတော့ ကိုယ် အရှုံးမခံနိုင်ဘူး။ တစ်ယောက်ကဆူလိုက် တစ်ယောက်က ရယ်လိုက်။ တစ်ယောက်က စိတ်တိုလိုက် တစ်ယောက်ချော့လိုက်။ တကယ်လို့ လူတစ်ယောက်က အမြဲတမ်း အရှုံးပေးနေရတယ်ဆို သူ စကားပြောမကျွမ်းကျင်လို့မဟုတ်ဘူး။ တစ်ဖက်သားကို အနာကျင်ဆုံးဖြစ်စေမဲ့စကားမျိုး ပြောမထွက်ရက်လို့ပေါ့။ တစ်ယောက်ယောက်တော့ အရှုံးပေးမှ နှစ်ယာက်လုံး ပျော်ရွှင်နိုင်မှာလေ။ စကားနိုင်သွားပေမဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတော့ ဆုံးရှုံးသွားရလိမ့်မယ် ဒီအရာကိုတော့ ငါတို့ အရှုံးမခံနိုင်ပါဘူး" .. တဲ့။᠌᠌᠌
တဈခါတုနျးက ခဏခဏစကားမြားတတျကွတဲ့ လငျမယားနှဈယောကျရှိတယျ။ ဒါပမေယျ့စကားမြားတဲ့အခေါကျတိုငျး ယောကျြားဖွဈသူက အလြှော့ပေးတတျ တယျ။ . တဈခါမှာတာ့ အမြိုးသမီးက သူ့ယောကျြားကို ထူးဆနျးလို့မေးလာမိတယျ။ . "ယောကငြ်္ားရေ.. ရနျဖွဈတိုငျး ရှငျဘာလို့ ကြှနျမကို အလြှော့ပေးတာလဲ။ တဈခါတဈလကြေ ကြှနျမဘကျက မှားတာလညျးရှိတယျလေ" . သူ့ယောကငြ်္ားဒီလို ပွနျဖွတေယျ။
"မငျးက ကိုယျ့မိနျးမ လကှေ။ဘာပဲပွောပွော ရှဘေ့ဝက ရစေကျကွုံလို့ ဒီဘဝမှာ လငျမယားလာဖွဈကွတာ။ ကိုယျပွောတာ နိုငျသှားတော့ရော ဘာထူးမှာလဲ။ စကားနိုငျပမေယျ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာရှုံးသှားမှာလေ။ ဒီဟာတော့ ကိုယျ အရှုံးမခံနိုငျဘူး။ တဈယောကျကဆူလိုကျ တဈယောကျက ရယျလိုကျ။ တဈယောကျက စိတျတိုလိုကျ တဈယောကျခြော့လိုကျ။ တကယျလို့ လူတဈယောကျက အမွဲတမျး အရှုံးပေးနရေတယျဆို သူ စကားပွောမကြှမျးကငျြလို့မဟုတျဘူး။ တဈဖကျသားကို အနာကငျြဆုံးဖွဈစမေဲ့စကားမြိုး ပွောမထှကျရကျလို့ပေါ့။ တဈယောကျယောကျတော့ အရှုံးပေးမှ နှဈယာကျလုံး ပြျောရှငျနိုငျမှာလေ။ စကားနိုငျသှားပမေဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာကိုတော့ ဆုံးရှုံးသှားရလိမျ့မယျ ဒီအရာကိုတော့ ငါတို့ အရှုံးမခံနိုငျပါဘူး" .. တဲ့။᠌᠌᠌